feltstone rug Umbhoxo - Imagazini yoyilo
Umbhoxo Indawo ethe tyaba yendawo enamatye inika ukukhohliswa kwamatye okwenene. Ukusetyenziswa kohlobo loboya obuhlukileyo kuhambelana nokujonga kunye nokuziva kombho. Amatye ahlukile komnye ngobukhulu, umbala kunye nokuphakama- umphezulu ubonakala kwindalo. Ezinye zazo zinempembelelo moss. Itafile nganye inengca egwebu ejikelezwe ngo-100% woboya. Kwisiseko sale nqobelo ithambileyo lonke ilitye liyanyibilika phantsi koxinzelelo. Ukuxhaswa kwesambatho kukubonisa okubonakalayo. Amatye atywinwe kunye kunye kunye nmat.
Igama leprojekthi : feltstone rug, Igama labayili : Martina Schuhmann, Igama lomthengi : Flussdesign Martina Schuhmann GmbH.
Olu luyilo olumangalisayo luphumelele imbasa yoyilo lwesilivere kwifashoni, isinxibo kunye nokhuphiswano loyilo lwesambatho.	Ngokuqinisekileyo kuya kufuneka ubone iipotifoliyo yoyilo lwesilivere esiphumelele ukufumana ezinye izinto ezintsha, ezintsha, ezendalo kunye nefashoni yoyilo, iimpahla kunye noyilo lwempahla.
Funda ngakumbi malunga nolu loyilo
Uyilo olumangalisayo. Uyilo oluhle. Uyilo olufanelekileyo
Uyilo oluhle lwenza ixabiso eluntwini. Yonke imihla sibonisa iprojekthi yoyilo ekhethekileyo ebonisa ukubalasele yoyilo. Namhlanje, sonwabile kukubonisa uyilo oluphumelele amabhaso olwenza umahluko oqinisekileyo. Siza kuba neenxalenye ezinkulu nezikhuthazayo zoyilo mihla le. Qiniseka ukuba undwendwela mihla le ukuze sonwabele iimveliso zoyilo ezilungileyo kunye neeprojekthi ezivela kubaqulunqi abakhulu kwihlabathi liphela.
Flussdesign Martina Schuhmann GmbH
Ifenitshala, izinto zokuhombisa kunye noyilo lwasekhaya
Bhalisa kwaye ulandele
Uyilo loyilo (412)
Illusion Iwebhusayithi Tuesday 3 August
Smartstreets-Smartbin™ Icuba / Igubu Yebhayidi Monday 2 August
Shayton Equilibrium Hypercar Sunday 1 August
Shicilela uyilo lwakho
Ngaba ungumyili, umzobi, umyili, umyili okanye umphathi wophawu? Ngaba unazo naziphi na zoyilo ezilungileyo zokwabelana? Sinomdla omkhulu ekushicileleni uyilo lwangempela kunye nolwakhiwo oluvela kubaqulunqi, amagcisa, abayili bezakhiwo, abavelisi bezinto ezintsha kunye neempawu emhlabeni jikelele. Fumana uyilo lwakho olupapashiweyo namhlanje.
Nyusa uyilo lwakho
Yila udliwanondlebe losuku Tuesday 3 August
Yila intsomi yosuku Monday 2 August
Uyilo losuku Sunday 1 August
Umyili wosuku Saturday 31 July
Iqela loyilo losuku Friday 30 July
Umbhoxo Martina Schuhmann feltstone rug
2021 Imagazini yoyilo.